Inkqubela phambili kulungelelwaniso lomgangatho woLwakhiwo lweeModeli (i-BIM) ibingumxholo ophakathi kweNkomfa yeZiseko zoPhuhliso, ebibanjwe nge-Okthobha eSingapore. Nangona iakhawunti yam ye-Twitter yayixhwilwe nge-hashtag # YII2017 ngezo ntsuku, nantsi ndibonisa isishwankathelo. Uhambo Ngeli xesha ndi ...
Khawufane ucinge ukuba uneseti yezicwangciso ezingama-45, ezineebhokisi okanye iimodyuli kuLwakhiwo eziphethe ulwazi oluhambelana netafile kwiOfisi yeMicrosoft, njengenombolo yephepha, ngubani owamkeleyo, umhla wokuvunywa, njl. Kwaye kufuneka ufake utshintsho kuzo zonke ezo nqwelomoya ngaphandle kokuvula nganye nganye, utshintsha nje idatha kwi ...
Ingxaki 1. Ifayile ye-DGW 3D ivula ngokungathi yimilinganiselo emi-2 kuphela. Kuqhelekile ukuba xa kuvulwa ifayile ye-3D kwifomathi ye-DWG, eneMicrostation, ivula ngokungathi inemilinganiselo emi-2 kuphela. Oku kuyenzeka kuba iMicrostation ihlala iqwalasele kukhetho lwayo, ukuba ifayile yembewu (imbewu), elingana ne ...
Isidingo esixhaphakileyo kukukwazi ukwazi utshintsho olwenzekileyo kwimephu okanye kwisicwangciso, ngokuthelekisa njengoko kwakunjalo ngaphambi kokuhlelwa okanye ngokusekwe kwixesha, kwiifayile ze-CAD ezinje nge-DXF, i-DGN kunye ne-DWG. Ifayile ye-DGN yifomathi kaMicrostation kunye nefomathi yendalo. Ngokuchasene nokwenzekayo nge ...
IsiSeko esiBonakalayo seZicelo luthotho lwamathala eencwadi athe uMicrosoft wawenza ukuba afumaneke, ephelelwe lixesha kodwa enamandla kakhulu, ngakumbi kwiinguqulelo zeOfisi ngaphambi ko-2010. nangona kunjalo, kuphuhliso olusekwe kwisakhelo, i-VBA yi ...
Lo ngumceli mngeni oqhelekileyo kwiiprojekthi ezininzi zeCadastral okanye zeCartography, ezathi kwisithuba sika-2000 ukuya ku-2010 zahlanganisa iMicrostation Geographics njengenjini yedatha yendawo, kuthathelwa ingqalelo izizathu ezifana nezi zilandelayo: Ulawulo lweArch-node lwalusasebenza kakhulu, kwiiprojekthi ze-cadastral . I-DGN yenye indlela enomtsalane, ithathela ingqalelo ukuguqulelwa kwayo kwifayile enye, ...
Usebenzisa le template, unokuzoba i-polygonal kwi-Microstation, ukusuka kuluhlu lweebheringi kunye nomgama kwi-Excel, okanye uluhlu lwe-x, y, z. Imeko yoku-1: Uluhlu lwemikhombandlela kunye nokuma masithi sinolu luhlu lwedatha ebaleni: Kwiikholamu zokuqala sinezitishi, ...
Ukulanda, Microstation-Bentley, Topography
Kule nqaku siza kubona indlela yokuvula, ukubeka umxholo kunye neleyibhile yefayile ye-shp usebenzisa iMicrostation V8i, esebenza ngokufanayo neMephu yeBentley. Nangona ziziifayile ze-16-bit ze-archaic, ezindala njengezinye-ezininzi- zam grays, akunakuphepheka ukuba ziqhubeke nokusetyenziswa kwimeko yethu ye-geospatial. Ewe kunjalo, ezi nqobo ziyasebenza kwizinto ezinxulumene nevektha ...
Ukubakho kokunxibelelana neemephu zikaGoogle kunye noGoogle Earth kunye nokuphatha idatha evela kwizikena zezinye zezinto ezilindelekileyo ezingxamisekileyo kuyo nayiphi na inkqubo ye-GIS-CAD. Kule miba, akukho mntu uthandabuzayo ukuba isoftware yasimahla iqhubele phambili ngokukhawuleza kunesoftware yokuthengisa. Okwangoku ndijonga uhlaziyo lwesibini lwe ...
Abo banethemba lokusebenzisa iMicrostation 8.5 namhlanje kufuneka babhenele kwiWindows XP koomatshini ababonakalayo ngenxa yokungangqinelani Windows 7, kubi kakhulu kumaqhosha angama-64. Bakhankanya ingxaki nomhleli wokubhaliweyo, endisele ndithethile malunga nendlela yokusombulula, kwaye bakwabhekisa kumphathi wemifanekiso kunye nonxibelelwano lwe-ODBC. Masibone ukuba zisonjululwa njani ...
Isiguquli seMyGeodata yinkonzo ye-Intanethi eququzelela ukuguqulwa kwedatha phakathi kweefomathi ezahlukeneyo. Okwangoku inkonzo iyamkela iifomathi zokufaka i-vector ezingama-22: I-ESRI Shapefile Arc / Info Binary Coverage Arc / Info .E00 (ASCII) Coover Microstation DGN (Inguqulelo 7) Imephu yeFayile yeComma yeXabiso eliHlukeneyo (.csv) GML GPX KML GeoJSON UK .NTF SDTS Ubalo lwabantu baseMelika ...